Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Alakụba ndị Thailand na -anabata ndị na -efe ofufe ọzọ
omenala • Akụkọ Ahụike • News • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Enyere ohere ikpe ekpere n'ụlọ alakụba Thaialnd ọzọ
Officelọ ọrụ Sheikul Islam (SIO) dị na Thailand akwadola ịmaliteghachi ekpere n'ụlọ alakụba na obodo ebe opekata mpe 70% nke ndị gbara afọ 18 ma ọ bụ karịa gbara ọgwụ mgbochi megide COVID-19.
Enwere ụlọ alakụba 3,500 na Thailand nke ọnụ ọgụgụ kacha ukwuu na Pattani Province yana nke jikọtara ya na Sunni Islam.
Oge ekpere n'ime ụlọ alakụba ga -abụ naanị nkeji iri atọ, ewezuga na Fraịde mgbe ndị na -efe ofufe nwere ike ikpe ekpere nkeji iri anọ na ise.
Ekwesịrị ịgbaso usoro ahụike ọha gụnyere gụnyere ikpuchi ihu, ịdọpụ uche mmadụ, na idebe aka.
SIO wepụtara nkwupụta na -ekwu na ọ na -enye ohere ugbu a ikpe ekpere n'ụlọ alakụba na obodo ebe kọmitii Alakụba mpaghara na ndị gọvanọ mpaghara jikọtara ọnụ iji belata mmachi na mmemme okpukpe.
Ọfịs ahụ chọrọ ka ndị otu kọmitii Alakụba nọ n'ụlọ alakụba na ndị na -efe ofufe gbaa ọgwụ mgbochi opekata mpe otu ugboro. Oge ekpere na -ejedebe naanị nkeji iri atọ na ekpere Friday ka ọ bụrụ ihe na -erughị nkeji iri anọ na ise.
Dị ka Ụlọ ọrụ Sheikul Islam, ndị bịara ya ga -enwerịrị irube isi na usoro ahụike ọha na ọkwa SIO. A chọrọ ka ha nyochaa ọnọdụ ahụ ha tupu ha abanye n'ụlọ alakụba, were nkpuchi ihu, debe anya n'etiti 1.5 ruo 2 mita n'etiti ahịrị ọ bụla n'oge ekpere. Gel na -ehicha aka ga -adị ngwa.
Thailand nwere ụlọ alakụba 3,494, dịka National Statistics Office nke Thailand na 2007 si kwuo, nwere 636, nke kachasị n'otu ebe, na Pattani Province. Dabere na Ngalaba Okwu Okpukpe (RAD), pasent 99 nke ụlọ alakụba na -ejikọ Sunni Islam na otu Shi'i Islam nke fọdụrụ.
Ọnụ ọgụgụ ndị Alakụba nke Thailand dị iche iche, ebe agbụrụ si na China, Pakistan, Cambodia, Bangladesh, Malaysia na Indonesia, yana gụnyere agbụrụ Thais, ebe ihe dị ka ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị Alakụba na Thailand bụ Thai Malay.
N'ozuzu ndị okwukwe okwukwe Alakụba na Thailand na -agbaso omenala na ọdịnala ndị metụtara Alakụba ọdịnala nke Sufism metụtara. Maka ndị Alakụba Thai, dị ka ndị otu ha na-ekpe okpukpe na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mba ndị ọzọ nwere ọtụtụ ndị Buddha, Mawlid bụ ihe ncheta ihe atụ nke ọnụnọ Alakụba na mba ahụ. Ọ na -anọchitekwa ohere kwa afọ iji mesighachi ọkwa ndị Alakụba dị ka nwa amaala Thai na nkwado ha na ọchịchị eze.
Okwukwe ndị Alakụba na Thailand na -egosipụtakarị nkwenkwe na omume Sufi dị ka mba ndị ọzọ dị n'Eshia dịka Bangladesh, India, Pakistan, Indonesia na Malaysia. Ngalaba Alakụba nke Alakụba na -enye ndị Alakụba nyere aka na nkwalite na mmepe nke ndụ Thai n'ọrụ ha dị ka ụmụ amaala, ndị nkuzi na ndị ọrụ mmekọrịta. Na Bangkok, ememme Ngarn Mawlid Klang bụ ihe ngosi mara mma maka obodo ndị Alakụba Thai na ụdị ndụ ha.